Fifandonan’ny Sinoa sy mpiasa gasy – Marovintsy Vatomandry: nidina namaha ny olana ny minisitry ny fiarovana sy ny Emmo/Nat | NewsMada
Fantatra fa nidina ifotony namaha ny olana ifandiran’ireo mpiasa malagasy amin’ireo Sinoa mitrandraka grafita any Marovintsy, Vatomandry, omaly, ny minisitry ny Fiarovana sy ny mpitandro filaminana avy amin’ny Emmo/Nat.
Raikitra ny savorovoro teo amin’ny mpiasa sy ny mpitantana ny orinasa mitrandraka vato grafita any Marovintsy, distrikan’i Vatomandry, ny alarobia lasa teo. Anisan’ny antony ny halatra nisesy tao amin’ny orinasa, nanomboka ny fiandohan’ny taona. Araka ny fanadihadiana nataon’ny tompon’andraikitry ny orinasa, ny mpitandro filaminana ary ny mpiambina avy ao an-toerana, nisy nangalatra ny manodidina ny 30%-n’ny tahiry gazoala ampiasain’ny Gallois. Nampanao tombana, nankinina amina teratany kanadianina iray, ny orinasa, ny volana febroary, saingy nisy namono, notapahin-doha ity farany.
Nandray mpiasa monina any an-toerana
Taorian’izany, nanao antso tolobidy amin’ny orinasa sivily tsy miankina, hiantoka ny fiambenana ny orinasa Gallois, hiantoka ny fiarovana sy ny fiambenana ny orinasa. Nahazo izany ny orinasa Assistance service de sécurité (ASS), ary nomena toromarika izy ireo, hanome vahana handray mpiasa avy amin’ny mponina any an-toerana, Marovintsy sy ny manodidina. Niisa 112 ny mponina avy ao an-toerana nirotsaka ary hita fa nisy ny anarana noforonina. Niisa 54 ny voaray ho mpiasan’ny ASS ary 15 hafa napetraka any amin’ny sampandraharaha hafa.
Tsy faly ireo tsy voaray ary nitarika ny mponina hikomy, nahatonga ny korontana sy ny fifandonana. Nitohy ny fandrobana ny tahirin’entan’ny orinasa Gallois, ny alarobia sy ny alakamisy, nahatonga ny mpitandro filaminana avy amin’ny Emmo/Nat nandray fepetra haingana, nidina tany an-toerana, omaly zoma.
Fampiasam-bola azo antoka sy maharitra
Tsy vao izao ny nisian’ny fikomiana na ny fitokonana nataon’ny mpiasan’ny Gallois. Tamin’ny volana marsa 2019 teo, nitokona izy ireo, nitaky ho 400 000 Ar ny karama farany ambany. Neken’ny mpampiasa izany na mihoatra lavitra amin’ny karama 200 000 Ar lazain’ny lalàna aza.
Manoloana ireo, mila jeren’ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena ny trangan-javatra toy izao. Tsy azo lavina ny fitsinjovana ny mponina eny ifotony fa mifanindry an-dalana amin’izany koa ny lafiny tena “fiarovana ny fampiasam-bola vahiny” (IDE) satria ilaina ny fampandrosoana eny ifotony sy ny fampandrosoana ny toekarena maharitra”.
Njaka A. sy Sajo